Otu esi akụ na-eto eto ma na-eto eto, iwu maka ilekọta acha anụnụ anụnụ - Ịkụnye honeysuckle - 2019
Mmanụ aṅụ: akuku, na-eto ma na-elekọta
Mmanụ aṅụ - Nke a bụ osisi nke nọchitere ezinụlọ Honeysuckle. A na-ahụkarị ya East Asia ma Himalaya. Ọtụtụ mgbe, a pụrụ ịhụ osisi a na ubi anyị, n'ihi na ọ bụ ihe na-adịgide adịgide ma na-amị mkpụrụ. N'ime ubi dị n'ókèala anyị, a na-ahụkarị ụdị osisi abụọ: oriri honeysuckle ma acha anụnụ anụnụ. Ka anyi leba anya karia ihe ndi ozo bu. Nke a bụ osisi shrub na alaka osisi. N'elu ịdị elu, osisi dịgasị iche iche nwere ike iru site na 1 ruo 5 m. Akwụkwọ nke shrub bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke, elliptical in shape, na ụfọdụ ụdị mmanụ aṅụ na-acha odo odo. Agba nke osisi dị ọcha, ọdịdị nke mgbịrịgba ahụ, na mkpụrụ osisi - oval black berries with a blue patina.
Ị ma?Mkpụrụ mmanụ aṅụ na-esi ísì ụtọ, ya mere Karl Linnae kpọrọ osisi "Capricoleum", nke pụtara "ísì ụtọ."
Ọkụ na okpomọkụ
Iwu na-edozi edozi
Nke mbụ, nke abụọ na nke atọ honeysuckle
Mmanụ aṅụ na-emegharị kwa afọ
Mwepụ nke mkpado jerk
Mwepụ nke mgbọrọgwụ osisi
Osisi thickening Ome n'ime okpueze
Esi gbanye osisi
Esi eme ka a ghara ịkwa mmanụ
Ọnọdụ maka ọganihu na-eto eto, nhọrọ nke ebe a ga-akụ mmanụ aṅụ
Mmanụ aṅụ na-aghọ nke otu n'ime osisi ndị a hụrụ n'anya n'etiti ndị na-elekọta ubi, dị ka nke a osisi na-adighi mma. Ma ọ na-achọkwa ịmara ụfọdụ ihe nzuzo gbasara ụdị ejiji na ozuzu.
Ikekwe Otu n'ime oge kachasị mkpa na nlekọta mmanụ aṅụ bụ ịhọrọ ebe ị ga-ebute. Karịsịa, osisi ahụ na-eche ebe ndị na-egbukepụ egbukepụ, pụọ na ifufe oyi na drafts. Ufodu osisi di iche iche dika ebe ozo. Mmanụ aṅụ na-eguzogide oyi, na-eguzogide oyi ruo 50 Celsius. Mkpụrụ osisi ndị na-emepụta mmanụ aṅụ na-anabata mmiri frosts n'emeghị onwe ha ihe ọjọọ. Ma oyi thaw nwere ike ime ka edemede mbido nke osisi, na ọnwụ nke akụrụ mgbe nlọghachi nke ntu oyi.
Ọ dị mkpa!Ọ bụrụ na ịchọrọ ịbawanye elu nke honey suckle, mgbe ahụ, a ga-akụ ya n'ebe ebe ọtụtụ bushes dị nso, dịka osisi ahụ na-ekpo ọkụ.
Ala nke osisi ahụ n'anya na-ehicha ma na-eme nri, ya mere, ọ bụrụ na mmanụ aṅụ na-etolite n'ime ala ájá, ọ dị mkpa ka ị "wụsa" ohia nke nwere ala ojii, ájá ma ọ bụ ájá. Karịsịa, mmanụ aṅụ na-etolite n'ọhịa ubi.
N'agbanyeghị na ọ dị mfe, honey suckle ka na-achọ nlekọta, nke bụ ịgbara mmiri, nri, ịtọghe, kwachaa. Tụlee usoro nke ịzụ nri na ịkụzi ihe.
Mmanụ aṅụ na-amasị mmasị na ịṅụ mmiri mgbe nile. Ebe ọ bụ na akụkụ shrub kachasị na-etolite n'ọdọ mmiri a na-emeghe, ọ na-enweta mmiri buru ibu, ma a ka nwere mkpa dịkwuo mmiri, karịsịa n'oge e guzobere mkpụrụ osisi na mkpụrụ osisi. Mmiri mmiri na-aṅụ mmiri na-adị kwa ụbọchị, na ngwakọta 1.5 bọket mmiri maka 1 ohia. Ọ dịkwa mkpa iji mmiri mee ihe n'oge oge ọkọchị.
Afọ abụọ mbụ nke ndụ ya na mmanụ aṅụ adịghị enye ya nri. N'afọ nke atọ nke mmanụ aṅụ na-emepụta nri na dacha, a na-emekwu nri.
Akpa mbu Ọ na-agụnye ịkụnye osisi na compost na obere ntinye nke ash na superphosphate, a na-etinye nri ndị dị otú ahụ n'oge ụbịa.
Nke abụọ Ọ na-agụnye nri ammonium nitrate (15 g kwa ịwụ mmiri) na mgbakwunye na nke ngaji nke urea. Mmiri n'okpuru ohia. A na-eme akwa mgbakwasa na mmiri, tupu oge ezumike.
Maka nke atọ akwa mgbakwasa (mgbe owuwe ihe ubi, na July) jiri nitrophoska ma ọ bụ nitroammofosku ke ruru 25-30 g kwa 10 lita mmiri.
N'ọtụtụ saịtị ndị na-agwa gị otú e si eto eto na mmanụ aṅụ, a na-edekarị ya a ga-egbutu osisi ahụ nanị afọ 7-10 mgbe ọ gasịrị.
Ọ dị mkpa!A na-adụ Florists ka ọ bụrụ prune honeysuckle ngwa ngwa mgbe ọ kụrụ iji laa n'iyi Ome.
Egbochi ịka nká kwachaa honeysuckle akwado njide, mgbe osisi ahụ ezuola "okenye", malite na afọ 8-10 nke uto. Ma, ọ bụrụ na a ghaghị ịkụcha osisi "n'ozuzu" otu ugboro n'afọ 3-4 ọ bụla, nyochaa ohia ọ bụla iche iche. Osisi ochie, gbajiri agbaji ka a ga-esi na-ebute ebe a ga-esi zọpụta nwata. Emezu usoro a ga - abụ na November - tupu ntu oyi mbụ n'ime December, mgbe ohia "tụfuo" akwụkwọ ndị ọzọ, ma ọ bụ na mbido March.
Top Ome ka mma iwepu n'oge opupu ihe ubi. Usoro ahụ dị mfe: jiri ogige nri dị n'ala ala iji "gbanyụọ" ome ma wụsa ebe a na-egbutu ya na ogige ubi.
Ị ma?Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ekwu na ọ bụrụ na Ome adịghị emerụ osisi ahụ, ọ pụkwara ịmị mkpụrụ n'okpuru ụfọdụ ọnọdụ. Nke a bụ akụkọ ụgha! Osisi kachasị elu "atụpụtara" n'ọtụtụ dị ukwuu nke ihe ọṅụṅụ na-enye ndụ nke ohia, nke na-ebelata àgwà nke Ome na mkpụrụ osisi.
Mwepụ nke mkpuru osisi - usoro dị mkpa maka afọ ise afọ ise na afọ ise. Osisi azu osisi bụ alaka "efu", nke na-enweghị Ome. Ulo dị otú ahụ na-achọ otu mineral dịka alaka osisi, n'ihi ya, a ghaghị iwepụ ya ozugbo. Iji wepụ, ịkwesịrị ịkpụ alaka ahụ na isi ala, n'emebighị ogbugbo nke ohia ahụ, "ọnya" ahụ na-etinye ogige ubi.
Na nnukwu oke nke honey suckle kwesịrị mkpa okpueze maka uto ka eto eto na-eto eto Ome. Maka nzube nke okpueze egbutu osisi ala na-eto eto.
Ọ dị mkpa!A ghaghị imechaa mmanụ aṅụ na ngwaọrụ ọkachamara ka ọ ghara imerụ ekwo ekwo n'onwe ya, ebe ọ bụ na mmebi usoro nwere ike ibute ọrịa dị iche iche.
A pụrụ imepụta mmezigharị mmanụ aṅụ na ụzọ dị iche iche. Esi agba mmanụ aṅụ cuttings esi mee kewaa ohia ma họrọ nhazi gwa gị ọzọ.
Cuttings - otu n'ime ụzọ kachasị mma nke mmeputakwa nke osisi, na mmanụ aṅụ. Ọtụtụ ndị amaghị otú e si eto mmanụ aṅụ, na-eme ọtụtụ emehie. Tụlee usoro ahụ n'ụzọ zuru ezu karị. A na-egbute mkpụrụ nke ohia na mmalite oge opupu ihe ubi, tupu buds amalite. Akụkụ ahụ kwesịrị ịbụ nnukwu, 7-8 mm na dayameta na ihe dị ka 15 cm n'ogologo. A na-akụ mkpụrụ osisi ahụ n'ala dị omimi nke 10 cm, ma mkpụrụ elu nke 2 ga-adị n'elu elu ala. Moisturize ala ma na-ekpuchi cuttings na fim maka dịrị. Mgbe izu 3-4 gasị ị ga-ahụ nsonaazụ.
Ị ma? Otu okenye okenye na-aṅụ honeysuckle nwere ike inye ihe 200 cuttings kwa oge.
Mmeputakwa site na ịdọrọ bụ ụzọ dị mfe, mana ihe niile ga-eme nke ọma. Na mbido July, ịkwesịrị ịtọghe ala gburugburu ohia, họrọ obere ụmụ Ome (ọkacha mma karịa afọ 1), gbadaa ha n'ala ma chebe ya na waya. Gaa na ala (peat, akwukwo ala). N'ime oge dum, a ghaghị ịṅụ mmiri ọkụ ma wepụ ya. N'oge opupu ihe ubi, a ghaghi ilechapu mkpuru osisi ndia anya site na ndi nne na nna. ma wezuga ihe ntanetị nke honey suckle na "obibi ebighi ebi."
Mgbasa site na nkerisi ohia nwere ike ibu osisi nke ruru afo isii. Iji mee usoro a, ịkwesiri igwu ohia na, na-eji onye nchekwa ma ọ bụ hụ, kewaa ya n'ọtụtụ akụkụ, na-atụgharịkwa ihe niile ahụ na ogige ubi. Osisi na-anọdụ n'obe ọhụrụ ma gbanye ya n'ime izu 3-4.
Ime ka onye toro eto na-eme ka ọ ghọọ ebe ọhụrụ bụ usoro siri ike. E kwuchaa ọ dị gị mkpa ọ bụghị naanị iji chọpụta ebe mgbọrọgwụ na-agwụ, ọ bụghị iji mebie rhizome, kamakwa nwee ike zuru oke, n'ihi na dị ka okenye toro eto dị oke. Na obere osisi, ọnọdụ ahụ dị mfe karị, ebe ọ bụ na ha dị ntakịrị, na usoro mgbọrọgwụ, n'otu aka ahụ. A na-akpali mmanụ aṅụ n'oge okpomọkụ, ma ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-atụ aro transplanting na mgbụsị akwụkwọ.
A na-eme usoro a dị ka algorithm na-esonụ:
a gwuru ohia ma nyochaa iji mata mgbọrọgwụ ọrịa, nke a na-ewepụ ozugbo;
N'elu oghere a kwadebere ya na omimi nke 20-30 cm (dabere na nha), a kụrụ shrub na kpuchie ya;
Mgbe a gwakọtara ya, mmanụ aṅụ na-achọ ezigbo mmiri.
Dị ka osisi ọ bụla, Mmanụ aṅụ ga-atọ gị ezigbo ụtọ ma ọ bụrụ na o nwechaghị ntakịrị ịhụnanya na ndidi gị.
Jiri ihe bara uru nke fennel na nkà mmụta ọgwụ na omenala
Ugboro Quail: ihe o yiri, ebe o bi, ihe o riri
Ugboro ole ka tomato na-esi na griin na-eme ihe, ụdị nke ịhazi tomato
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Mmanụ aṅụ: akuku, na-eto ma na-elekọta